Ogaden News Agency (ONA) – Xisbiga Medrak oo Soosaaray Bayaan Ay Ku Cambaareeyeen EPRDF.
Xisbiga Medrak oo Soosaaray Bayaan Ay Ku Cambaareeyeen EPRDF.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in xisbiga mucaaradka ah ee Medrak uu dhaleecayn dusha usaaray maamulka wayaanaha iyo xisbi kusheega EPRDF.
Bayaan kasoo baxay xisbiga mucaaradka ah ee aan tabarta lahayn ee Medrak ayaa lagu cambaareeyay falalka foosha xun ee ciidamada wayaanuhu ay kawadaan guud ahaan wadanka iyo waliba taloobooyinka qaran dumiska ah ee kooxda EPRDF/TPLF ay qaadayaan.
Sida bayaanka lagu sheegay xisbiga sii burburaya ee EPRDF ayaa faraha kula jira musuq maasuq aad uwayn, waxaana bayaanka lagu xusay in kooxdu ay si adag uga ganacsanayso dhiiga shacabka iyagoo isku diray qoomiyadihii dariska ahaa oo dhan.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gabi ahaanba wadanku uu burburayo hadii aan si dag dag ah wax looga qabanin, waxaana bayaanka lagu sheegay cadaymo dhowr ah oo muujinaya wadada khaldan ee wadanku uu saaran yahay.
Sidoo kale xisbiga ayaa ku taliyay in talada wadanka loo dhiibo shacabka si ay aayahooda uga tashadaan, wuxuuna xisbiga tabarta yar ee Medrak kadigay cawaaqibka ay arintaasu dhali karto.
Xisbigan Medrak oo ay kujiraan rag aad u culculus waxaa gudoomiye ka ah madaxwayne kusheegii hore ee wayaanaha Dr Nagaso Gidada, waxaana kujira Dr Marara Gudina oo mudo dheer xabsiga kuxidhan & Wasiirkii gaashaandhiga ee hore Siye Abraha Professor Banye Petrose.